बजेट घटेकाले सिमित स्रोतको प्रभावकारी र सहि परिचालनमा जोड दिन्छौँ : उपाध्यक्ष योङहाङ « Mechipost.com
प्रकाशित मिति: २५ जेष्ठ २०७७, आईतवार १५:२१
थर्पू । कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी तथा लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावले स्थानीय तहको बजेट समेत प्रभावित हुँदैछ । विशेषत स्थानीय तहका विकास निर्माणका कार्यमा बजेट कटौतीले ठूलो प्रभाव पार्ने देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमै राजश्व बाँडफाँट तथा वित्तीय समानिकरणको सम्पूर्ण बजेट निकास नहुँदा विकास निर्माणका कार्यहरुको रकम निकासामा स्थानीय तहहरुलाई समस्या परेको छ ।
पाँचथरको याङवरक गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कमलकुमारी योङहाङका अनुसार बजेट घटेसँगै विकास निर्माणका कार्य र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम समेत प्रभावित हुन्छ । याङवरक गाउँपालिकाले पाँच वर्षे आवधिक योजना निर्माण गरी चालू आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा समेत ल्याइसकेको छ । याङवरकमा उक्त आवधिक योजनाका जगमा वार्षिक योजनाहरु निर्माण गर्दा वर्षेनि करीब रु. ४० करोडको बजेट निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर आवश्यकताभन्दा आधाभन्दा कम बजेट प्राप्त हुने भएपछि गाउँपालिकाले अत्यावाश्यक र महत्वपूर्ण क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन गर्ने तयारी थालेको छ । “याङवरकवासीका आवश्यकता पूरा गर्न वर्षेनि ४० करोड बजेट छुट्याउनुपर्ने अवस्था छ । तर हामीसँग करीब रु. १७ करोड बजेट उपलब्ध हुन्छ”, गाउँपालिकाको बजेट निर्माण समितिकी संयोजक समेत रहेकी उपाध्यक्ष योङहाङले भन्नुभयो, “अब सिमित स्रोतको समुचित परिचालनमा विशेष जोड दिन्छौँ ।”
यस्तै आगामी दिनमा लकडाउन तथा कोरोनाबाट प्रभावित समुदायलाई उत्पादनमूलक तथा श्रम गर्ने क्षेत्रमा परिचालन गर्ने गाउँपालिकाको तयारी रहेको उपाध्यक्ष योङहाङले वताउनुभयो । भावी दिनमा समेत आत्मनिर्भर हुनसक्ने काममा लगाउने गाउँपालिकाको तयारी रहेपनि बजेट अभावले त्यस्ता योजना समेत प्रभावित हुने उहाँको भनाई छ । “जे जति भएको स्रोतलाई जनतामैत्री कार्यक्रम ल्याई सदुपयोग गर्ने हाम्रो योजना छ”, उपाध्यक्ष योङहाङले भन्नुभयो ।
यस्तै आगामी दिनमा सडक विस्तार तथा स्काभेटरको प्रयोगभन्दा मानिसले नै सडकको स्तरोन्नति गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने, पशुपालन तथा कृषि उपज उत्पादनमा जोड दिने, उत्पादित सामग्रीको बजार प्रवन्ध गर्ने गाउँपालिकाको तयारी रहेको उपाध्यक्ष योङहाङले वताउनुभयो ।
गाउँपालिकाले प्राप्त बजेटलाई छुट्टिनैपर्ने स्थानमा पुर्याउने तथा बालुवामा पानी नभई मलिलो ठाउँमा पानी खन्याएको गाउँपालिकावासीलाई अनुभूति दिलाउने प्रयत्न गरिने उहाँले वताउनुभयो । गाउँपालिकाले बजेट निर्माण गर्ने क्रममा समेत विषयगत समितिहरुबाट यीनै विषयमा केन्द्रीत छलफल भइरहेको उपाध्यक्ष योङहाङले जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिकाले असार १० भित्रै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी थालेको उहाँले वताउनुभयो ।